Sidee buu u dhacay hawlgalkii lagu dilay hoggaamiyaha Daacish? - BBC News Somali
Sidee buu u dhacay hawlgalkii lagu dilay hoggaamiyaha Daacish?
Mareykanka ayaa goor dhaweyd shaaciyay in hoggaamiyihii muddada dhuumaaleysiga ku jiray ee kooxda la baxday Dowladda Ismaalka ee Daacish lagu dilay hawlgal milatari oo Mareykanka uu ka sameeyay woqooyi galbeed Suuriya.
Madaxweyne Trump oo warbaahinta kula hadlayay Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in in Abuu Bakar Al-Baqdaadi uu qarxiyay jaakaddii uu xirnaa oo ay ku rakibnaayeen walxaha qarxa ka dib markii ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay uga daba galeen god uu ku cararay.
Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa soo shaac baxay sanadkii 2014, xilligaasi oo uu magaalada Mowsil uga dhawaaqay "dowlad Islaami" ah oo ka shaqeyn doonto waddamada Suuriya iyo Ciraaq.
Kooxdiisa Daacish ayaa tacaddiyo badan ka geysatay gudaha waddamadaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen kumannaan qof.
Aaway hoggaamiyiha 'Daacish' Abuubakar al Bqadaadi?
Kooxda Daacish ayaa sidoo kale weerarro dhawr ah ka geysatay magaalooyin ku yaal daafaha caalamka balse Mareykanka ayaa horraantii sanadkan sheegay in kooxdaasi laga adkaaday.
Dilka Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa ah guul weyn oo u soo hoyatay madaxweyne Trump iyo maamulkiisa oo aad loogu dhaliilay go'aankii uu dhawaan ciidamada Mareykanka uga saaray woqooyiga Suuriya.
Trump ayaa sheegay in Abuu Bakar Al-Baqdaadi uu ku cararay god dhulka hoostiisa isaga oo ay ceyrsanayaan eeyo ay wateen ciidamada Mareykanka.
"Xalay, Maraykanku waxa uu cadaalladda marsiiyay hoggaamiyaha kaalinta koobaad uga jira argagixisada caalamka. Abubakr Al-Baqdaadi waa uu dhintay. Waxa uu ahaa hoggaamiyaha iyo asaasaha ISIS oo ah ururka ugu arxanka darran caalamka. Maraykanku waxa uu Al-Baqdadi ku daba jiray sanado badan. Ma jiro wax khasaare ah oo ciidamadeena ka soo gaaray hawlgalkaasi oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid ah dagaalyahannada iyo asxaabta Al-Baqdaadi," ayuu yiri madaxweyne Trump.
Hoggaamiyaha Daacish Abuu Bakar Al-Baqdaadi.
"Waxa uu ku cararay god dhulka hoostiisa ah, waxaan ku dirnay oo godka uga dabagalay eeyadeenna. Waxa uu qarxiyay jaakaddii uu xirnaa isagoo dilay naftiisa iyo saddex canug oo uu watay. Jirkiisu waxa uu ku googo'ay qaraxa, waxaana ku soo dumay godka. Baaritaanka aan jirkiisa ku sameynay ayaa markiiba muujiyay inuu qofkaasi yahay Al-Baqdaadi."
Trump waxaa uu sidoo kale sheegay in 11 carruur ah laga soo badbaadiyay gurigii uu degganaa, waxaana uu hadda sheegay in dunidu ay tahay mid amni ah maadaama buu yiri la khaarijiyay "ninkii ugu cadowsanaa dunida".
Warbaahinta Mareykanka ayaa mar sii horreysay sheegtay in milatariga Mareykanka uu weerar ku qaaday Abuu Bakar Al-Baqdaadi.
Waxaa la sheegayaa in hawlgalka ay sameeyeen ciidamo gaar ka dib markii ay heleen xog muhiim oo tallaabo lagu qaadi karo, waxaa sidaasi soo weriyay warbaahinta Newsweek iyadoo soo xiganayso ilo wareedyo la xiriira hawlgalka.
Hoggaamiyaha Daacish ayaa marar hore la sheegay in la dilay balse warkaasi sax ma ahayn.
Maxaa laga ogyahay sida uu u dhcay hawlgalkaasi?
Goobta uu weerarka ka dhacay ayaa ah gobolka Idlib oo aan waligii looga shakin in uu ku nool yahay, waxaana in badan la filayay in Al-Baqdaadi uu ku dhuumaaleysanayo xudduudda waddamada Suuriya iyo Ciraaq.
Qeybo badan oo ka mid ah gobolkaasi Idlib waxaa hadda gacanta ku haya kooxo mintid ah balse ka soo horjeeda kooxda uu Al-baqdaadi hoggaaminayay ee Daacish. Waxaa in badan jiray tuhun ah in kooxahan mintidka ahi ay sidoo kale gabbaad siinayaan mintidiin ka tirsan Daacish.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa Al-Baqdaadi ay la socdeen muddo usbuucyo ah isla markaana dhawr jeer oo hore la hakiyay hawlgal la doonayay in lagu baacsado.
Trump ayaa sheegay in uusan jirin askari Mareykan ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay hawlgalkaasi oo galaaftay nolasha Al-Baqdaadi iyo saaxibbadiisa. Waxa uu intaasi ku daray in ay jiraan mintidiin Daacish oo gacanta lagu dhigay iyo macluumaad aad muhiim ah oo ay goobtaasi ka heleen ciidamada Mareykanka.
Qof rayid ah oo deggan deegaanka Barisha oo ah goobta uu hawlgalka ka dhacay ayaa BBC-da u sheegay in diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah ay muddo 30 daqiiqo ah duqeynayeen goobtaasi. Diyaaradahaasi ayaa gebi ahaanba dhulka la simay guri ku yaallay halkaasi.
Madaxweyne Trump ayaa ammaan kala duldhacay waddamada Ruushka, Turkiga iyo dowladda Suuriya oo uu sheegay in ay gacan ka geysteen hawlgalkaasi lagu dilay Al-Baqdaadi.
Hogaamiyaha kooxda IS oo fariin cusub soo diray
Waa kuma Al-Baqdaadi?
Abuu Bakar Al-Baqdaadi, ma ahan magaca saxda ah ee hoggaamiyahaas maanta la dilay balse magaciisa dhabta ah aya ah Ibraahim Cawad Ibraahim Al-Badri, waxaana la rumeysan yahay in sanadkii 1971 uu ku dhashay deegaanka Samarra oo ku yaal Woqooyiga Baqdaad.
Wararku waxay sheegayaan in uu sheekh ka ahaa masaajid ku yaalla Samarra, xilligii Mareykanka uu ku duulayay Ciraaq sanadkii 2003-dii.
Ciidamada Ciraaq ayaa sawirkan baahiyay 2014-kii, waxayna sheegeen in uu Al-Baqdadi yahay
Dadka qaar ayaa rumeysan in Al-Baqdaadi uu xitaa xagjir ahaa xilligii maamulkii madaxweyne Saadaam Xuseen. Qaar waxay rumeysan yihiin in uu xagjir noqday muddadii afarta sano ahayd ee uu ku xirnaa saldhigga Bucca, oo ah xero ciidamada Mareykanka ay leeyihiin oo ku taalla Woqooyiga Ciraaq.
Xeradaasi waxaa lagu xiri jiray hoggaamiyeyaasha ururka Al-Qacidda ee dalka Ciraaq. Markaasi ka dib, wuxuu soo baxay isagoo ah hoggaamiye ka tirsan Al-Qaciddada Ciraaq, ka dibna kooxdiisii ayaa la rumeysan yahay in ay ka goosatay Al-Qaacidda lana baxday ururka Dowladda Islaamka, sanadkii 2010-kii.
Bishii Oktoober ee sanadkii 2011-kii, Mareykanka wuxuu Al-Baqdaadi ku daray liiska shakhsiyaadka argagixisada ahi, wuxuu balanqaaday 25 milyan oo doollar oo abaalmarin ah, lacagtaa oo loo ballan qaaday qofkii nolol ama geeri ku keena Al-Baqdaadi.
Maxay tahay lacagta ay isku hayaan Dowladda Federaalka iyo HirShabeelle?